Andro: 10 Janoary 2020
Hotsaboina amin'ny toeran'ny sekretera amin'ny fifanarahana 1 (iray) amin'ny alàlan'ny fanadinana ao amin'ny Tale Consulate General any Toronto ny olona. II) afaka mangataka vatsim-pianarana: 1. ho olom-pirenena ao amin'ny Repoblikan'i Torkia, 2. Rehefa nandinika daty 41 taona [More ...]
Mehmet Cahit Turhan, minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa, dia nilaza fa 2023 kilometatra ny lalamby lalamby vaovao no ho vita mifanaraka amin'ny lasibatra 5.509 an'ny firenentsika ary noho izany dia hahatratra 17.525 kilometatra ny halavan'ny lalamby. Ny tahan'ny fanavaozana ny lalamby [More ...]
Ireo mpianatra ao amin'ny AGÜ dia hanao internship amin'ny Deutsche Bahn
Abdullah Gül University (AGU) dia nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny Deutsche Bahn (Railway Alemà), orinasa lehibe fitaterana sy lozika lava indrindra eran'izao tontolo izao ary mpandraharaha ny lalamby lehibe indrindra any Eropa. Ny fifanarahana AG [More ...]
Ny orinasam-pitaterana fitateram-bahoaka any Bursa dia hampiasa angovo azo avy amin'ny herinaratra mba hialana amin'ny volavolan-jiro. Ny orinasam-pitaterana fitateram-bahoaka any Bursa dia hampiasa angovo azo avy amin'ny herinaratra mba hialana amin'ny volavolan-jiro. Bursa Transportation Co. dia subsidiary iray ao amin'ny kaominina ao Bursa Metropolitan. (BURULAŞ), miaraka amin'ny dingan'ny «Energy Energy Energy» [More ...]
Fitsipiky ny fitateram-bahoaka lesona ho an'ny ankizy any amin'ny gara Metro
Tao amin'ny gara metro Mecidiyeköy, ny mpianatra sekoly ambaratonga faharoa dia nanangana hetsika fahatsiarovan-tena mba hisarihana ny fitsipiky ny fitateram-bahoaka. Ireo mpianatra izay misolo tena ny hazakazaka haingam-pandeha haingana indrindra amin'ny maha-solontena azy dia manomana ny etikety miaraka amin'ny peta-drindriny sy ny bokiny. [More ...]
Kılıçdaroğlu Miteny ao amin'ny atrikasa Channel Istanbul
Ny mpitarika ny CHP Kemal Kılıçdaroğlu dia niresaka tao amin'ny atrikasa düzen Channel Istanbul İ nokarakarain'ny IMM. Dik Izahay dia tonga amin'ny teboka toy izany dia manentana ny sakafo omen'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo izy ireo. 15 Jolay ny havan'ny maritiora sy ny veterana no mijery ilay vola [More ...]
Ny ben'ny tanàna Nizip Mehmet Sari, Gaziantep ary ny serivisy any amin'ny distrika Nizip dia hiasa amin'ny rafitry ny lalamby ho azo antoka kokoa sy azo antoka, hoy izy. Ben'ny tanànan'ny Nizip Mehmet Sarı, [More ...]
Ao amin'ny Show Electronics Show - CES 2020, Fiat dia nanolotra ny fomba fiasa vaovao sy maoderina fiatrehana Fiat Concept Centoventi. Any Las Vegas, ny haino aman-jery elektronika mpanjifa lehibe indrindra eran-tany CES 2020 [More ...]
Ny filohan'ny antoko GOOD Meral Akşener dia niresaka tao amin'ny atrikasa İstanbul Channel Istanbul İ nokarakarain'ny IMM. Hoy i Akşener, “Tsy nifantoka tany Istanbul nandritra ny 9 taona ny fantsona. Iza no miteny hoe 'Ecdat ecdat' [More ...]
Tiorkia Automobile Enterprise Group (TOGG), Etazonia Las Vegas fiara an-toerana tao amin'ny Consumer Electronics Show natao tany (CES) nampiditra izao tontolo izao ho any amin'ny vahoaka. Araka ny vaovao nozarain'i Torkia ny LinkedIn kaonty Cars Initiative Group Filoha Tale Jeneralin'ny TOGG [More ...]
Ny tetikasan'ny Ben'ny tanànan'i Fatih Mehmet Erkoç taloha an'i Kahramanmaraş, eo amin'ny talantalana ny rafitry ny lalamby. Ben'ny tanàna Güngör sy Ak [More ...]
:Mamoğlu: Vokatry ny atrikasa Channel Istanbul
Ny “Channel Istanbul Workshop tarafından nokarakarain'ny IMM dia nanomboka tamin'ny fandraisana anjaran'ny mpitarika ny CHP Kemal Kılıçdaroğlu sy ny filohan'ny antoko GOOD Meral Aksener. Ekrem İmamoğlu, président de la munto de Istanbul Metropolitan, no nanao ny lahateny fanokafana, “Istanbul, Kanal [More ...]
Kayseri dia ho taona 2020 ho an'ny fampiasam-bola sy fizahan-tany
Ben'ny tanànan'ny Kayseri Metropolitan Memduh Büyükkılıç, nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tao Erciyes. Nandritra ny fihaonana dia nanombatombana ny taona 2019 ny Ben'ny tanàna Büyükkılıç ary nanome fampahalalana momba ny fampiasa amin'ny taona 2020. Tamin'ny taona 2019 dia nahazo 3 miliara 149 ny tanàna [More ...]
Ny fiaran-dalamby voalohany indrindra teto an-tany natomboka tany Chine
Ny fiaran-dalamby voalohany eran-tany, izay afaka manao dia kilometatra 350 kilometatra isan'ora, napetraka tany Shina. Ny fiaran-dalamby dia hiasa eo anelanelan'ny tanànan'ny renivohitra Beijing sy ny tanànan'i Zhangjiakou, izay hotontosaina ny Lalao Olaimpika ny taona 2022. Repoblika People ao Shina amin'ny teknolojia haingam-pandeha [More ...]